यी दश सपना देखे तपाईलाई अकस्मात धन लाभ हुन्छ — newsparda.com
यस्तो किन पनि हुन्छ भने सपनाको सम्बन्ध भविष्यमा घट्ने घटनाहरुसँग हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । स्वप्नशास्त्रका अनुसार कुनै राम्रा सपनाहरुले पनि नराम्रा नतिजा दिन्छन् र कुनै नराम्रा सपनाहरुले पनि राम्रा प्रभाव दिन्छन् । यसकारण सपनासँग डराउने भन्दा पनि यसका अर्थहरु बुझ्नु नै हितकर हुनेछ ।
सपनामा भवन बन्दै गरेको देख्नुको मतलब हो तपाईलाई प्रमोशन मिल्दैछ वा धनलाभ हुनेवाला छ ।आफैंलाई एकदमै गरिब वा भिखारीको रुपमा देख्नुभयो भने यस्तो सपनाको अर्थ हुन्छ तपाईलाई धनलाभ हुँदैछ ।
सपनामा आफ्नै आत्महत्या गरेको देख्नुभयो भने तपाई डराउनुहुन्छ होला तर डराउनु पर्दैन । किनकी यस्तो सपनालाई राम्रो मानिन्छ । यसको अर्थ हुन्छ, तपाईंको आयू बढेको छ ।सपनामा यदि तपाईंले गुलाब देख्नुभयो भने यस्तो सपनाको संकेत हुन्छ, तपाईको कुनै ठूलै मनोकामना पूरा हुँदैछ ।
सपनामा सर्प देख्नु राम्रो मानिन्छ । सपनामा सर्प देख्नुले सरकारी क्षेत्रमा लाभ मिल्ने कुरालाई संकेत गर्दछ । यसलाई धन र सन्तान प्राप्तिको संकेतको रुपमा पनि बुझिन्छ ।सपनामा छेपारो देख्नुभयो भने यो पनि शुभ संकेत हो । यसको अर्थ तपाईले धनप्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हो ।
सपनामा सुगा देख्नुको अर्थ हो तपाई धन प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ ।सपनामा आफैंलाई चिहानमा देख्नुको अर्थ हो तपाईलाई छिट्टै कुनै मान सम्मान वा कुनै लाभ मिल्नेवाला छ । सपनामा तारा देख्नुभयो ? यसको अर्थ के होला ? नराम्रो पक्कै होइन । यसको अर्थ हुन्छ, तपाई कुनै शुभ समाचार सुन्नेवाला हुनुहुन्छ ।